Hf Alxanka Machine, Qalabka Alxanka -Frequency Sare - Mingshuo
Diode oo dhan hagaajinta mowjadaha ayaa ku daraya IGBT goynta si loo beddelo hagaajinta SCR, waxay hagaajineysaa qodobka awoodda; Qaybta DC iyo qeybta beddelka waxay ku jiraan hal gole, taas oo yareynaysa marin -biyoodka iyo wareegga u dhexeeya kabadhada, taas oo si wax ku ool ah uga fogaata faragelinta korantada iyo yareynta waqtiga rakibidda .
1000KW line -soo -saarka tube dhexroor weyn̵ ...
200KW ahama Steel dhagax dhagax Impeder for Hig ...
400KW Taxanaha iskuxirka Solid state igbt hfw ..
1. Taageerada Qiimaha ugu Fiican
Wuxuu bixiyaa qiimaha ugu wanaagsan ee wada -hawlgalayaasha, waxaanan u rajaynaynaa wakiilladeenna ama qaybiyayaasheenna inay helaan faa'ido weyn iyo qaybsiga suuqa.
2. Taageerada Farsamada & Iibka
Will Wuxuu bixiyaa taageerada iibka sida buugga hordhaca, dukumiintiyada farsamada, tixraaca, kormeerida rakibidda goobta iyo fulinta hawsha.
waxaan ilaalin doonnaa macaamiisha waxaanna diidi doonnaa codsi toos ah oo khuseeya iibintaada.
Sannadkii 2017, gobolka Mingshuo mashiinka alxanka soo noqnoqda ee aadka u sarreeya wuxuu helay shahaadada GOST - R sababtuna tahay baahida shahaadooyinka mashiinka alxanka ee macaamiisha; Sanadkii 2020, Kooxda Mingshuo waxay ku guuleysatay patent farsamo mashiinka alxanka, iyo dhowr waalid oo kale oo ku saabsan alxanka ayaa la codsanayaa. ...
Sannadkii 2018, Mingshuo Electric wuxuu keenay IGBT Solid State High Frequency Welder si uu uga qaybgalo bandhigga
Bishii Sebtembar 2018, Kooxda Mingshuo waxay ka qaybgashay 8th All China - International TUBE & PIPE INDUSTRY TRADE FAIR sida soo -bandhige. No .: E2C55. Wakhtigaas, waxaan qaadnay mashiinka alxanka cusub - IGBT Solid State High Frequency Welder. Alxankaan wuxuu qaatay teknolojiyad cusub - ...
Alaab -qeybiyeyaasha Shiinaha oo siibanaya caag tayo sare leh